Vavaka ho an'i San Ramón Nonato? Mangina amin'ny vava sy ny vehivavy bevohoka [+]
Vavaka ho an'i San Ramón Nonato Izy no fitaovam-piadiana tsara indrindra ho an'ireo vehivavy bevohoka satria fantatra fa iray amin'ireo olo-masina izay manampy indrindra ireo bevohoka.
Mazava ho azy fa azo angatahina amin'ny zavatra hafa izay hanelanelana azy ho antsika izy, na inona na inona toe-javatra misy azy.
Mahery vaika ny vavaka, tsy azontsika atao tsinontsinoavina ny herin'izy ireo.
Ny sasany very finoana ary noho ny fomba fanaony eo amin'izao tontolo izao ankehitriny fa ny fanantenana tokana ananantsika dia tsy mila very.
ny alalan ' ny vavaka afaka ataontsika tsara kokoa ny zava-drehetra ary rehefa misy toe-javatra mafampana amin'ny fiainana dia afaka misetroka ao isika mba hahazoana ny tanjaka sy hanohizantsika ny lalana.
1 Vavaka ho an'i Saint Ramón Nonato Iza izy?
1.1 Ny vavaka amin'i San Ramón Nonato hanampona vava
1.2 Vavak'i San Ramón Nonato manoloana ny mifosafosa
1.3 Ho an'ny vehivavy bevohoka
2 Mahery ve ity olo-masina ity?
Vavaka ho an'i Saint Ramón Nonato Iza izy?
The nickname non natus, izay midika hoe tsy teraka.
Nomena izany satria namoy ny ainy talohan'ny nahitan'i San Ramón ny hazavan'ny tontolo vaovao izay handray azy. Izany no iray amin'ireo antony nahatonga azy ho lasa olo-masina amin'ny vehivavy bevohoka.
Ny tantarany dia nanomboka tamin'ny 1200 tamin'ny fotoana hahaterahany, taorian'ny nahatongavany ho olon-dehibe ny finoany tsy niova dia nitondra azy tany Afrika izay nanampiana olona maro ho mpamonjy voagadra.
Ny iraka lehibe ataonao dia ny hitolo-tena ho an'ny voafonja sasany Tao anatin'ny toe-piainana ratsy izy ireo.
Taorian'ny nampijalijaliana azy dia nanome baiko tsara kokoa ny mpitsara ilay izy mba hahazoana ilay famonjena natao.
Na izany aza, i San Ramón Nonato no tompon'andraikitra tamin'ny fanarahana azy mitory sy manampy ireo izay mila izany ary raha vantany vao nanasa azy ho faty ny mpitsara, dia sazy izay natao satria nandoa ny avanavotany izy ary navotsotra.
Ny vavaka amin'i San Ramón Nonato hanampona vava
Saint Ramon Nonato noho ny hery anananareo ary nomen'Andriamanitra anao aho dia omeo ahy izay angatahiko aminao hametraka hidim-baravarana ao am-bava amin'ireo izay te-hanao diso ahy.
(Lazao ny anaran'ny olona / s)
Ny olona miteny ratsy ahy na te-hanao ratsy, te hametraka ahy ratsy, dia jiroko io labozia io mba hahafanao mihidy vava.
Ary manatanteraka ny zavatra angatahina aminao aho, satria nitory tamin'ny tenin'Andriamanitra ianao, dia naverina ho maritiora hitondra fika ao am-bavanao.
Henoy ny vavaka ataoko Saint Ramon Nonato mba hangina am-bava sy hifona eo anatrehan'Andriamanitra Ray ho an'ireo izay miteny ratsy ahy dia ajanony ny fiezahan'izy ireo nomen'ny Andriamanitra mahery anao rehetra.
Ny faniriana tezitra hanafaka ny andevo dia manakana ahy tsy hiteny ratsy, amin'ny fahavalo, amin'ny famadihana.
Izay te hanisy ratsy ahy dia avelao aho hiaina am-piadanana ary lavitra an'ireo rehetra mandrebireby ahy.
Izany dia noho ny fialonana, ny ratsy na ny lolom-po, te-hahita ratsy aho avy amin'ireo maniry hanaratsy ahy amin'ny fanendrikendrehana azy, San Ramón Nonato.
Noho ny hatsaram-ponao lehibe dia aza avela ny fangatahana nataoko raha mangataka anao amin'i Jesoa Kristy Tompontsika.
Raha te hanidy vava ianao, izany no vavaka San Ramón Nonato marina.
Ny tenin'Andriamanitra dia mampitandrina ny amin'ny loza tsy aterany Mety ho ny fitenin'olombelona izany, ny famoahana matetika matetika dia mamono fa tsy basy.
Izany no antony ao amin'ny katolika fiangonana ary izao tontolo izao an'i Kristy dia mino izahay fa afaka manampy antsika i San Ramón Nonatos hampangina ireo vava misokatra ireo ary mahatonga antsika ratsy amin'ny fomba lehibe.
Ity fepetra ity dia milamina manoloana io hetsika manimba io satria tsy mampiasa valifaty mivantana isika fa kosa miangavy fa ilay olo-masina no tompon'andraikitra amin'ny fampanginana ireo izay manohatra antsika.
Vavak'i San Ramón Nonato manoloana ny mifosafosa
Ry Saint Ramon Nonato malaza, izay nampianatra ny tenin'Andriama- nitra anao, ka nanendry anao ho fampijaliana hitondra entana eo am-bavan'ny lohahevitra.
Henoy ny fanindronako ahy ary miditra an-tsehatra eo anatrehan'Andriamanitra Tompontsika mba hamaranana izay manaratsy ahy ny fanenjehana ahy ary ho voaro amin'ny hafatra na tanjaka ratsy sy manimba ...
Azafady, ilay Andriamanitra Avo Indrindra izay nanome an'i Saint Ramon Nonato ny finiavana maimaim-poana ho an'ny andevo malalaka, mangataka anao amin'ny fanelanelanana anao.
Enga anie ianao hanaisotra ahy tsy hanaiky foana, amin'ny fahotana izay manasaraka ahy aminao, ary hahomby aho amin'ny fandriam-pahalemana sy ny fahitan'ny olona rehetra mitsikilo ahy sy mampahory ahy.
Izy dia mahavita misaraka mandrakizay amin'ny mpanohitra izay, na inona na inona, fitaka na lolompo, nanisy ratsy ahy.
Na te hanala ahy miaraka amin'ny fanalam-baraka izy ireo.
Andriamanitra ô, fantatro fa noho ny famindram-ponao lehibe, ary amin'ny alàlan'ny fanelanelanan'i Saint Ramon Nonato dia tsy ho foinao ny fanamavoana ny fangatahana nataoko.
Miangavy anao aho, amin'ny alàlan'ny nahary anao, dia Jesosy Kristy Tompontsika malala, izay sady miara-manjaka aminao amin'ny Fanahy Masina Saint Ramon Nonato.
Ianao, izay miaina akaikin’Andriamanitra tokoa, angataho aminy ny olako, fa tsy mba miaro ny fiarovanao sy ny fiarovako velively ianao, fa ny diplaomanao malaza dia manampy ahy amin'ny toe-javatra ratsy sy sarotra.
Ny fifosana amin'ny ratsy dia matetika manimba fianakaviana, ny fisakaizana na ny tontolon'ny asa. Tsy fanelingelenana loatra ary manimba be loatra ka tsy ahatsapantsika izany mandra-pahavitan'ny ratsy.
Ny vavaka ho an'ny Saint Ramon Nonato manohitra ny mifosafosa Manampy anao izany hiaro anao amin'ity loza ity.
Afaka manontany anay izahay na ho an'ny sakaiza na mpiara-miasa izay manaratsy azy.
Ny zava-dehibe momba ity vavaka ity sy amin'ny ankapobeny, ny finoana izay anaovana azyTokony hatoky isika fa raha mangataka isika dia ho tonga hatrany amintsika ny valin-tenin Andriamanitra, na manao ahoana na manao ahoana ratsy ny toe-javatra iainantsika.
Ho an'ny vehivavy bevohoka
Ianao no nahatongavako tamim-pitiavana lehibe izay itondranao ireo mpivavaka aminao.
Raiso, ny Iray Masiko, ireto vavaka izay atolotro anao be izao, ho fahatsiarovana ny fivavahanao tena mendrika, ka dia avy amin'Andriamanitra izay nanao anao ho mpitari-tena manokana amin'ny vehivavy bevohoka.
Inty ny Iray Masiko, iray amin'izy ireo izay manetry tena eo ambany fiarovanao sy miaro anao, miangavy anao fa tahaka ny faharetan'ny faharetanao hatrany dia tsy voadona mandritra ireo valo volana izay naha-martira tokana anao ireo.
Ary ny fanaintainana hafa nandanianao tao anatin'ny tranomaizina maizina ary tamin'ny volana fahasivy dia navelanao malalaka ireo fonja rehetra ireo, noho izany masina sy mpisolovava ahy, mangataka aminao am-panetrentena aho hanatona ahy avy amin'ny Andriamanitro sy Tompoko ...
Ilay iray izay voahazona ao anaty tsofin-tsofina dia tazomina ho salama ary ho salama mandritra ny valo volana, fa amin'ny fahasivy kosa dia maimaimpoana amin'ny fahazavan'ity tontolo ity, ka mahatonga anao ho Masina, ho tahaka ny andro hivoahan'ny fanahinao ihany. ny vatanao dia andro alahady, izay andro fifaliana sy firavoravoana, noho izany ny andro nanaterako dia feno fahafaham-po sy fifaliana rehetra, miaraka amin'ireo toe-javatra rehetra izay fantatrao fa mifanaraka tsara indrindra amin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny anao ary famonjena ny fanahy sy zanako.
La vavaka ho an 'ny vehivavy bevohoka de San Ramón Nonato dia iray amin'ireo tsara indrindra azonao mivavaka.
Mpiaro mahatoky amin'ireo tena sahirana, San Ramón Nonatos tsy fantatra amin'ny maha mpanampy lehibe na mpamonjy vehivavy bevohoka.
Fantatsika fa ny fitondrana vohoka iray hafa dia toe-javatra mahatonga ny olona ho marefo kokoa.
Na ahoana na ahoana maikaRaha bevohoka atahorana na olana hafa no mitranga dia lasa fialofana lehibe ity olo-masina ity.
Mandritra ny dingana fihetsehana dia voalaza fa hanao fotoana amin'i San Ramón Nonato ho an'ny vehivavy bevohoka isan'andro fa ny fiangonana katolika dia nanomana manokana an'io fotoana manan-danja io eo amin'ny fiainan'ny olombelona tsirairay.
Ny fepetra tokana dia ny finoana izay angatahina.
Misy maro ny mpino izay mihambo fa nahazo fanampiana avy amin'ity olo-masina ity amin'ny fotoana sasany rehefa mila azy ireo izy.
Hatramin'ny nahatongavany teto an-tany dia niahy ny hanampy ny sahirana izy ireo na inona na inona very na fandavana ny fahasalamany na ny fahalalahana ao anatin'izany.
Ny zavatra notadiaviny foana dia ny fanampiana sy ny fihazonana finoana amin'ny olona rehetra hihaona aminy.
Mbola mijanona ho toy izany ankehitriny izy, na dia efa taona maro lasa izay taorian'ny nahafatesany, San Ramón Nonato dia mbola manohy manampy ara-potoana ho an'ireo ao anatin'ny toe-javatra mety hiseho ara-batana na ara-panahy.
Na izany aza, ny finoana no tsiambaratelo mahatonga ny vavaka tsirairay ho mahery vaika, ny Baiboly Masina dia mandrisika antsika hangataka rehefa mila fanampiana ary koa misaotra ny soa omena azy.
Ny tena zava-dehibe indrindra mivavaha amin'ny vavaka San Ramón Nonato amin'ny finoana!